ओमकार टाइम्स सम्बन्धको तगारो बन्दै समाजिक सञ्जाल – OMKARTIMES
सम्बन्धको तगारो बन्दै समाजिक सञ्जाल
भान्छामा रहेकी श्रीमतीले कोठामा रहेका श्रीमानलाई म्यासेन्जरमा खाना तयार भयो खान आउनुस् भनेर बोलाउँछिन् । अनि उसैगरी श्रीमानको जबाफ आउँछ, ‘एक छिन् पर्ख है ! म स्कूल पढ्दाको साथीसँग अनलाइनमा कुरा गर्दैछु ।’ अनि श्रीमती पनि भान्छामै बसेर फेसबुक चलाउन व्यस्त हुन्छिन् । यो कुनै सिनेमाको पटकथा नभएर अहिले आम मानिसको जीवनशैली जस्तै भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत टाढा रहेका साथीहरुसँग नजिक भइरहँदा एउटै परिवारमा भएका सदस्यबीच भने दुरी बढेको छ । मकवानपुरकी रुपा सिंजाली मगर भन्छिन्, कहिलेकाँही त हामी श्रीमान श्रीमती एउटै ओछ्यानमा भएर टाढा छौ जस्तै लाग्छ । श्रीमान प्रायजसो सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुँदा पारिवारिक कुरा गर्न पनि समय नपुगेको जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, भाईवर, इमो, ह्रवाट्सएप, इस्टाग्राम, मेसेन्जर) ले टाढा भएका सम्बन्धहरु जोड्दै छ भने नजिकका सम्बन्धहरुलाई टाढा बनाएको महशुस हुन थालेको छ ।
मानिसहरुको सामाजिक सञ्जालप्रति लत बसिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालबिना प्राय मानिसहरुलाई समय बिताउन गाह्रो हुन थालेको छ ।
कतै यात्रा गरिरहँदा होस् वा कसैलाई पर्खदा मानिसहरुलाई सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोग गर्ने बानी परिसकेको छ । वा भनौ समय कटाउने मेसो सामाजिक सञ्जाल भएको छ । प्रयोगको लत यतिसम्म परेको छ कि शौचालय जाँदा समेत मोवाईल, ईन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल नभई हुँदैन । युवा पुस्ता मात्र होइन बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरुले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मानिसको प्रिय साथी बनिसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल आवश्यकता कि रहर ?
आधुनिकतासँगै सामाजिक सञ्जालको मोह पनि चुलिँदो छ । सामाजिक सञ्जाल खराब नै हो भन्नु गलत हुन्छ किनकि यसका अनेक लाभदायी पक्षहरु पनि छन् । आजको समय प्रविधिको समय हो । प्रविधि विना मानिसहरुको जीवनको कल्पना गर्न सायदै सकिन्छ होला । प्रविधिकै एउटा उपज हो सामाजिक सञ्जाल ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कतिपय मानिसहरुले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिरहेका छन् भने धेरैजसो मानिसहरुले आवश्यकता भन्दा पनि रहरले प्रयोग गरिरहेको मनोविद पदमराज जोशी बताउँछन् ।
सदुपयोग कम दुरुपयोग बढी
सामाजिक सञ्जालको पहुँच नहुँदा मानिसहरु भौतिकरुपमा टाढा रहेका मानिसहरुसँग कुरा गर्न घण्टौं समय हिँडेर टेलिफोनको सुविधा भएको ठाउँमा पुग्दथे । तर पछिल्लो समय एउटै घरका दुईवटा कोठामा रहेका दुई व्यक्तिहरुबीच पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी हुने गर्दछ । जसले मानिसलाई सहजता ल्याएको छ भने यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट अपरिचित मानिसहरुलाई साथी बनाएर जीवनसाथीसम्म बनाएका छन् । तर कतिपय कुरामा सामाजिक सञ्जाल घातक पक्ष बन्न पुगेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग रानिपोखरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक श्याम ज्ञवालीले बताए । विशेष गरी युवापुस्ता र गृहणी महिलाहरुले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न नसक्दा समस्यामा पर्ने गरेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
ज्ञवालीका अनुसार विभिन्न सोसियल नेटवर्किङ्ग साइटहरुले सर्वसुलभ उपलब्धताले आफन्त, साथीभाइलाई एक अर्काबीच सम्पर्कमा रहन सुविधा त पु¥याएको छ तर दुरुपयोग गरी त्यसबाट विभिन्न दुर्घटनाहरु पनि हुने गरेका छन् ।
केन्द्रिय अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरिक्षक केदार ढकालका अनुसार प्रशस्तरुपमा आएका सामाजिक सञ्जालबाट अपरिचित व्यक्तिलाई साथी बनाउने र उनीहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, यौनजन्य क्रियाकलाप, ठगीका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा यौन व्यवसायलाई सहज बनाउन पनि मुख्य भूमिका खेलेको प्रहरी उपरिक्षक ढकालले बताए । मोबाइलमै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले यौनजन्य सामाग्रीको प्रचार गरी विभिन्न व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नेसम्मका काम पनि भइरहेको पनि प्रहरी उपरिक्षक ढकालको भनाई छ ।
मानिसलाई एकोहोरो बनाउँदै
सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले मानिसलाई एकहोरो बनाउदैं लगिरहेको छ । मनोविद पदमराज जोशीका अनुसार जति मात्रामा सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई नजिक बनाएको छ त्यति नै प्रयोगकर्ताहरु त्यसको लतमा फस्दै गएका छन् । एउटै परिवार, एउटै घर, एउटै भान्छा हुँदा पनि पारिवारिक छलफलमा कमी आउन थालेको छ । जोशी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मानिसलाई यान्त्रिक बनाइदिएको छ । मानिसहरु असामाजिक बन्दै गएका छन् ।’
मानिस एक्लै रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोग आवश्यकता अनुरुप विभिन्न जानकारी लिनु उपयुक्त हो तर मानिसहरु यसलाई दुरुपयोग गरिदिँदा अबको हाम्रो दैनिकीलाई नै असर गर्ने उनी बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जाल वैकल्पिक सञ्चारमाध्यम पनि बनेको छ । तत्कालै सूचना दिन सामाजिक सञ्जाल उपयुक्त विकल्प त भएको छ तर कतिपयले मानिसको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्दा त्यसले झनै समस्या निम्त्याउने जोशी बताउँछन् । कतिपयले गलत सन्देश प्रशारण गरिदिँदा पनि नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । मानिसहरु आफूले सामाजिक सञ्जालमा हालेको फोटो भिडियोलाई भाईरल बनाउने नाउँमा विभिन्न विभत्स तस्वीरहरु सञ्जालमा हाल्ने अरुको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिँदा त्यसले अर्को दुर्घटना पनि निम्त्याउने पनि जोशी बताउँछन् ।
ऊर्जाशील समयको बर्बादी
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, ऊर्जाशील समयको बर्बादी । अध्ययनरत् विद्यार्थीहरू हुन् वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, उनीहरूको महत्वपूर्ण समय सामाजिक सञ्जालमा रहेको छ । फेसबुक तथा म्यासेन्जरमा घण्टौँसम्म च्याटमा बसेर साथीहरूसँग अनावश्यक गफ गरेर बस्दा महत्वपूर्ण काम भने छुटिरहेका हुन्छन् । मानिसहरु आफ्नो कार्यसमय नै भुलेर सामाजिक सञ्जालमा भुल्नुले उनीहरुको उर्जाशील समय उपलब्धिविहीन हुन पुगेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको एकोहोरो रुपमा प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने मनोविदहरुको भनाई छ । निरन्तररुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहँदा मष्तिस्कलाई आराम नहुनाले दैनिक क्रियाकलापमा असर गर्दछ । साथै निरन्तर रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा तनाब उत्पन्न हुने हुनाले दिनको केही घण्टामा प्रयोग गर्न उनीहरुको सुझाव छ । प्रविधिले खुम्च्याएको जीवनशैलीलाई तन्काउन मनोविज्ञहरुको आग्रह रहेको छ ।